Christie Agatha. Afọ ncheta ọmụmụ ya. Nhọrọ akpaokwu | Akwụkwọ ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 15/09/2021 12:00 | Ndị edemede, Novela, Black akwụkwọ
Christie Agatha, ihe a na -apụghị ịgbagha agbagha reina na ihe omimi na nke akwụkwọ akụkọ nchọpụta, ka dị ugbu a maka ndị niile na -akwado ụdị a. Taa bụkwa ụbọchị ọmụmụ ya. O jiri ihe fọrọ nke nta ka ọ mebie ndekọ ahịa niile n'oge ya E rere 4.000 nde akwụkwọ ma gaa n'ihu na ikpo okwu. Na mgbakwunye, ndụ ya abụghị ihe omimi na ụbọchị iri na otu ahụ ọ na -efu n'amaghị kpọmkwem ihe o mere. Ma, ebe ọ bụ na taa bụ ụbọchị ọmụmụ ya, anyị ga -echeta ya otu ugboro site na iji nke a gụọ ya nhọrọ ahịrịokwu na iberibe Nke ọrụ ya.
Christie Agatha. Nhọrọ nke akpaokwu na iberibe
Mgbe ụfọdụ akara aka yiri ka ọ na -akwa ụmụ mmadụ emo site n'inwe obi ụtọ n'ịchọpụta ihe ha ga -achọ izo na nzuzo.
Ihe omimi nke ụgbọ oloko na-acha anụnụ anụnụ
Mgbe ụfọdụ ana m ejide n'aka na ọ na -agba ara dị ka onye na -akụ ọkpọ, mgbe ahụ ọ bụ naanị mgbe ọ na -agba ara nke ukwuu ọ dị m ka enwere usoro maka ara ya.
Ọnọdụ dị omimi nke Styles
"Ebumnuche maka igbu ọchụ na-adị obere mgbe ụfọdụ, nne."
"Gịnị bụ ebumnuche ndị a na -ahụkarị, Maazị Poirot?"
"Ihe a na -ahụkarị bụ ego." Nke ahụ bụ, iji merie n'ọkwa ya dị iche iche. Mgbe ahụ enwere ịbọ ọbọ na ịhụnanya, na egwu dị ọcha na ịkpọasị, na ọmịiko.
"Ee, ma'am." Anụla m maka ya; kwuo A, iwepụ nke B naanị maka ọdịmma nke C. Ogbugbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na -abịakarị n'otu egwuregwu. A na -ewere onye dị ka ihe na -emerụ mmepeanya ma ewepu ya maka nke ahụ. Ndị dị otu a na -echefu na ndụ na ọnwụ bụ ọrụ nke ezi Onyenwe anyị.
Ọnwụ na Naịl
Ụmụ nwanyị n'amaghị ama na -ekiri obere nkọwa otu puku, n'amaghị na ha na -eme ya. Uche dị n'okpuru gị na -achịkọta obere ihe ndị a niile wee kpọọ nsonazụ nke nsonaazụ.
Ogbugbu nke Roger Ackroyd
Onye ọ bụla maara ihe mgbe niile, "Adam kwuru," ọbụlagodi na ọ bụ ihe ha na - amaghị na ha maara.
A pusi na nduru
Ọ dịghị ihe jọgburu onwe ya dị ka ibi na gburugburu enyo, ịhụ anya na -ele gị na ka ịhụnanya si agbanwe n'ime ha maka ụjọ, ọ nweghị ihe dị oke egwu nke ga -enyo onye gị na ya dị nso n'anya. Ọ bụ nsi, miasm.
Ihe omimi nke uzo uzo ugbo ala
Kedu mgbe nwanyị ga-agha ụgha? Mgbe ụfọdụ site n'onwe ya. Ọ na-abụkarị n’ihi nwoke ọ hụrụ n’anya. Mgbe niile maka ụmụ ha.
Igbu mmadu na gọọlfụ
Ihe ha chọrọ bụ ntakịrị omume rụrụ arụ na ndụ ha. Mgbe ahụ ha agaghị enwe ọrụ zuru oke ịchọ ya na ndị ọzọ.
Ọnwụ n'agha ahụ
Mụ nwoke iri jiri ojii gaa nri abalị. Otu riri ka mmiri ha hapụrụ: Itoolu.
Littlemụ obere ojii itoolu n’ehihie abalị. Otu na-etetabeghị n'ụra ma ha nọgidere: Asatọ.
Littlemụ obere ojii asatọ jiri aka ha gafee Devon. Otu gbapụrụ ma ha nọgidere: asaa.
Mụ okorobịa ojii asaa na-eji anyụike egbutu osisi. Otu gbubiri abụọ wee hapụ ha: Isii.
Ụmụ obere ụmụaka isii na -eji anụ a playedụ egwu egwu. Otu n'ime ha gbụrụ a beeụ wee hapụ ha: ise.
Littlemụ nwoke ise ndị isi ojii mụrụ iwu. Otu onye n’ime ha nwetara akara ugo mmụta wee nọrọ n’ebe ahụ: Anọ.
Menmụ nwoke anọ ndị obere ojii gara n'oké osimiri. Azụ uhie uhie ilo otu ma ha hapụrụ: Atọ.
Littlemụ obere oji atọ gabigara n'ime ụlọ anụ ụlọ. Anụ bea wakporo ha ma ha hapụrụ: Abụọ.
Mụ nwoke ndị isi ojii abụọ nọ ọdụ n’anyanwụ. Otu n’ime ha gbara ọkụ wee nọgide: Otu.
Obere nwa nwoke di iche. O wee kwụgbuo onwe ya, ma ọ dịghị onye fọdụrụ!
Nwa ojii iri
Ekwula ihe ọ bụla ị maara, ọbụnadị onye ị maara nke ọma.
Ihe omimi Mr. Brown
Inwe agụụ maka ilekọta mmadụ ọzọ e kere eke na -eweta ihe mgbu karịa ọ joyụ; mana n'otu oge ahụ, Elinor, mmadụ agaghị enwe ahụmịhe ahụ. Onye ọ bụla na -ahụtụbeghị n'anya adịtụbeghị ndụ.
Cypress dị mwute
Enyí nwere ike icheta, mana anyị bụ ụmụ mmadụ ma ọfụma ụmụ mmadụ nwere ike ichefu.
Enyí nwere ike icheta
Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị mmadụ, ewezuga ndị uwe ojii, nwere ntụkwasị obi gabigara ókè n'ụwa ọjọọ a. Kwere nke ukwuu n'ihe a gwara ha. Anaghị m eme ya. Ndo, mana m na -achọ mgbe niile idobe ihe.
Ozu na ọba akwukwo
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Christie Agatha. Afọ ncheta ọmụmụ ya. Nhọrọ akpaokwu